Boggagan netku waxey dheeraad ku yihiin buugga waxbarashada ee Intro, kaas oo laga helo hordhac ah cilmiga bulshada ee noorwiijiga ee loogu talagaley dadka waaweyn ee haajiriinta ah. Waa bilaash in la isticmaalo boggan netka.
Waxa ku jira boggagan netka waxey raacayaan hab la mid ah ka buugga waxbarashada. Waxaana weeye toddoba mawduuc oo waaweyn. Ku bilow adiga oo liiska (meny) mawduuc ka dooranaya. Intaa kadib waxaad doorataa mawduuca aad xiiseyneyso inaad macluumaad dheeraad ah ka akhrido. Mawduucyada badankooda waxa ku jira leylisyo aad ka shaqeyn karto.
Boggaga netka waxa lagu helaa luqadahan:
Halkan waxa kale oo aad ka heli kartaa xidhiidh ah boggaga kale ee netka ee ey ku jiraan warbixino gaar ah oo ku saabsan mawduucyadan. Boggagani inta badan waxey ku qoran yihiin af-noorwiiji, laakiin qaar ka mid ah waxa ku jira wax loo turjumey luqado kale.
Si aad u arki karto una akhriyi karto waxyaabahan waxaad u baahan tahey booragaraamyada Acrobat Reader iyo Flash. Booragaraamyadan waxaad u soo raran kartaa si bilaash ah.